सलिसल्ला सडक हस्तान्तरण - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > सलिसल्ला सडक हस्तान्तरण
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२ bampijhyala
१ साउन, बाँपीझ्याला, हुम्ला। नेपाली सेनाले कर्णाली करिडोरको खुलालु–लैफु–सलिसल्ला खण्डको सडक हस्तान्तरण गरेको छ । आज भन्दा आठ वर्षअघि २०७० सालदेखि काम सुरु गरेको नेपाली सेनाले सो सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सडक विभागअन्तर्गतको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाली सेनाको कर्णाली करिडोर सडक निर्माण कार्य दलका प्रमुख मिलन कार्कीले हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । करिडोरअन्तर्गत सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको काम सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गरिएको होे । कोरोना महामारीका कारण काम सम्पन्न हुन केही ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै उहाँले हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट गाडी पु¥याउने लक्ष्य नजिक पुगेको बताउनुभयो ।
हाल हुम्ला खण्डमा पर्ने सडकमा बालुकुनासम्म यातायात सञ्चालन भएकोमा हस्तान्तरणपछि सलिसल्लासम्म हुनेछ । सो खण्डमा सेनाका गाडी भने अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । अब सलिसल्लाबाट बाजुरा, कालीकोट हुँदै सुर्खेतसम्म यातायात सञ्चालन हुनेछ ।
यसबाट जिल्लाका चारवटा गाउँपालिका ताँजाकोट, अदानचुली, चङ्खेली र सर्केगार्ड गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ भनी गोरखापत्र अनलाईनमा भनिएको छ ।
क्रिस्टिन सिंकलर को हुन् ? १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२
आईजीपीको प्रस्तावले सशस्त्रमा हङ्गामा १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२
माइक्रो फाइनान्स समूहको सूचक २ दशमलव २२ प्रतिशतले बढ्दा १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२
के होला कक्षा १२ को परीक्षा ? १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १९ गते, मंगलवार, ३ अगस्ट २०२१ १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:१२